Ikhaya / Blog / Ukulungiswa Kwama-Mirror Okugeza, abantu abangu-99% Bazoyibheka Le Mininingwane
2020 / 10 / 21 UkwahlukanisaBlog 5403 0
Ngaphezu kwendlu yangasese, umcengezi, ishawa kanye nekhabethe lokugezela, igumbi lokugezela lidinga nezinye izinto eziningi ezifana namashelufu, amarowu amathawula nezibuko zangasese.
Indlu yokugezela ingeyesibili kuphela egumbini lokuphumula nasekamelweni lokulala lapho sivakashela khona nsuku zonke, endlini yangasese, indima yesibuko sokugezela ayinakubukelwa phansi. Isibuko esikhanyayo nesikhanyayo singaletha isimo esihle lapho ugqoka. Njengoba izinga lokuphila lithuthuka, isibuko asisetshenziswanga ukuwasha nokukama kuphela.
Ukuphakama kwesibuko se-Bathroom
Ukuphakama kwesibuko kuyinto yokuqala esiyicabangayo ekufakweni, ngoba ngokungafani nezinye izibuko zasendlini, imvamisa sikhetha ukubuka isibuko esimi endlini yokugezela. Ukuphakama kwesibuko kufanele kulungiswe ngokuya ngobude bamalungu omndeni, ukuphakama kwesibuko kufanele kugcinwe cishe kumitha elilodwa amamitha amathathu ukusuka phansi. Imvamisa sikhetha ukugcina isikhungo sesibuko sibe ngu-1-3 cm ngaphezu kwaphansi.
Ngenxa yobukhulu obuhlukile besibuko, kuvame ukuba nezindlela ezinhlanu zokulungisa isibuko: ukulungisa isikulufa, ukulungisa izinzipho, ukulungisa ukubopha, ukulungisa ingcindezi nokulungisa ukusekelwa kokubopha. Indlela ngayinye inezici zayo kanye nokusebenza kwayo.
Akudingi nje kuphela ukuthi sidinga ukwenza ngokwezifiso ukuphakama lapho sifaka isibuko sokugeza, futhi kudingeka sazi okulandelayo.
Isibuko sokugeza kufanele sifakwe kude neshawa noma kubhavu ukuze sinikeze isikhala esanele semisebenzi yokugeza.
Njengoba ukugeza kudala umoya oshisayo, singakucabanga ukuthenga izibuko ezilwa nenkungu.
Ngokubheka ubumfihlo nokucabanga kwe-feng shui, isibuko kufanele sibhekane nodonga ngangokunokwenzeka futhi sigweme ukubheka umnyango noma iwindi.
Lapho ukhetha ukukhanyisa indawo yokugezela, singacabanga ukusebenzisa amalambu phansi noma amalambu odonga. Asikukhuthazi ukufakwa kwamalambu okugeza endlini yokugezela, yize amalambu emuhle, kepha umphumela wokuvimbela ukungena kwamanzi uvame ukuba mubi, imvamisa awuzukuthatha isikhathi eside ngaphambi kokwehluleka.
Isibuko se-Bathroom asilula ukusifaka efasiteleni lize liye emnyango wendlu, ukugwema ukubonakala kwesibuko lapho ubona izinto ezithile ezimbi, okudala ukwethuka, ukwethuka, ikakhulukazi ebusuku.
Abanikazi abaningi bokulungisa bazonciphisa ngamabomu indawo yokugezela enqubweni yokulungisa kabusha, ukukhulisa igumbi lokulala noma igumbi lokuphumula, bese kuthi ngokubonakala kwesibuko ukudala ukukhohlisa kwesikhala, ngokukhohlisa okubonakalayo ukukhulisa indawo yokugezela. Uma kwenzeka ucabanga ngendlela efanayo, lapho-ke kubalulekile ukuthi uzame ukukhetha imibala ekhanyayo yendlu yakho yokugezela, imibala elula ingenza indlu yakho yokugezela ibonakale inkulu, kuyilapho imibala emnyama inganikeza umuzwa wengcindezelo, futhi isibuko singabonakala kucindezela kakhulu, ngakho-ke ukuze indlu yokugezela ifakwe isibuko, kungcono ukhethe imibala elula yokugezela!
Indlu yangasese ifakwe izibuko, nokukhanya endlini yokugezela kufiphele, kungakhathalekile ukuhleleka kombala endlini yangasese, kuzofiphala, khona-ke ukubonakala kwendlu yokugezela ngesibuko, kusobala ukuthi indlu yokugezela ifiphele kakhulu futhi iyacindezela. Uma igumbi lokugezela limnyama, lapho kukhona khona okukhanyayo, isibuko ngokusobala sizoba nokukhanya okuqinile, khona-ke umehluko phakathi kokukhanya nobumnyama bendlu yangasese, bheka ukukhanya kwesibuko sokugezela kuzoba lula ukwenza abantu bazizwe bengazinzile. Uma izibani zikhanya, indlu yokugezela isemnyama kakhulu futhi nekhwalithi yokusebenzisa isibuko inciphe kakhulu. Ngakho-ke akunconywa ukuthi wakhe indawo yokugezela engacacile, abanye abantu bacabanga ukuthi i-dim inenhliziyo ethe xaxa, empeleni, endabeni ye-feng shui nezibuko akulungile.
Edlule :: Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esivuzayo? Kubuthuntu? Ingabe Amanzi Ahamba kancane? Izandla Zokuthi Ungayilungisa Kanjani Olandelayo: Uyazi ukuthi Iyimbi Kangakanani Indlu Yangasese "Inuka kabi"? Thola Umthombo Ofanele Ukuyilungisa!